Al-Shabaab oo banneeysay degmooyinka Galgaduud - Sabahionline.com
Al-Shabaab oo banneeysay degmooyinka Galgaduud
Al-Shabaab ayaa isaga huleeshay qaybo ka mida degmooyinka Galgaduud Talaadadii (15-ka May) kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Ahlu Sunna wal Jamaa iyo ciidamada Itoobiya ay ku soo wajahan yihiin dhankooda.
Midowga Afrika oo balaarinaya howlgalkiisa militari ee Hiiraan
Ahlu Sunna wal Jamaaca oo al-Shabaab ka qabsatay tuulo u dhow Baardheere
Dagaalyahannada al-Shabaab ayaa ka baxay Jacar, Gal-hareeri iyo Bargan oo ku taxan xudduuda degmooyinka Ceel-buur iyo Ceel-dheere, sidaana waxaa Radio Bar-Kulan oo ay maal-galiso QM u sheegay Cabdi Xasan Maxamed oo ah madaxa ammaanka ciidamada Ahlu Sunna wal Jamaaca. Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa Ceel-buur xoraysay bishii March, waxaanay u babac-dhigeen weerarro xigay oo ay al-Shabaab soo qaadday April.
Maxamed waxa uu sheegay in la arkayay tiro badan oo ka mida dagaalyahannada al-Shabaab oo sii baxayay. Waxa uu ugu yeeray Soomaalida in ay ku soo noqdaan guryahooda mar haddii ay haatan al-Shabaab halkaa isaga baxday, waxana uu ballan ku qaaday in howlo bini’aadanimo iyo kuwo amni laga bilaabi doono degmooyinka laga baxay.